फेरि सक्रिय हुने दाउमा प्रधानन्यायाधीश जबरा
पछिल्ला दिनमा बारको आन्दोलन प्रभावकारी हुन नसकेको र संसदमा आफू विरुद्ध महाभियोग दर्ता नहुने सम्भावना देखेका प्रधानन्यायाधीश जबरा प्रशासनिक र पदेन संलग्न हुने निकायमा सक्रिय हुने चाहना देखाइरहेका छन् ।
काठमाडौं । कोरोनाभाइरस संक्रमित भएपछि उपचाररत प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा शुक्रबार डिस्चार्ज भएका छन् । कोरोनाभाइरस संक्रमित भएपछि १३ मंसिरमा अस्पताल भर्ना भएका प्रधानन्यायाधीश जबरा पाँचौँ दिनमा शुक्रबार डिस्चार्ज भएका उपचाररत अस्पताल नेपाल एपीएफ अस्पतालले जानकारी दिएको छ । १३ मंसिरदेखि यस अस्पतालमा कोभिड–१९ निमोनियाको लागि उपचाररत रहेका प्रधानन्यायाधीश जबरा १७ मंसिर बिहान साढे ९ बजे […] The post प्रधानन्यायाधीश जबरा अस्पतालबाट डिस्चार्ज appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal.
कोरोनाभाइरस संक्रमित भएपछि उपचाररत प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा शुक्रबार डिस्चार्ज भएका छन् । कोरोनाभाइरस संक्रमित भएपछि १३ मंसिरमा अस्पताल भर्ना भएका प्रधानन्यायाधीश जबरा पाँचौँ दिनमा शुक्रबार डिस्चार्ज भएका उपचाररत अस्पताल नेपाल एपीएफ अस्पतालले जानकारी दिएको छ ।१३ मंसिरदेखि यस अस्पतालमा कोभिड–१९ निमोनियाको लागि उपचाररत रहेका प्रधानन्यायाधीश जबरा १७ मंसिर बिहान साढे ९ बजे स्वास्थ्य लाभ गरी डिस्चार्ज भएका अस्पतालले विज्ञप्ति जारी गरेर जानकारी दिएको छ । अस्पतालले जा
बारको अवरोधको बीच प्रधानन्यायाधीश जबरा सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरे
काठमाडौं, २६ कार्तिक । नेपाल बार एशोसिएशनको अवरोधका बावजुद पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबरा सर्वोच्च प्रवेश गर्नुअघि ठूलो संख्यामा प्रहरी तैनाथ गरिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश जबरालाई बारले कार्यालय प्रवेश गर्न नदिने भनेको थियो । बारले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा मागेर आन्दोलन जारी राखेको छ । हिजो बारको आन्दोलनमा […]
प्रधानन्यायाधीश जबरा बिचौलियाका नाइके हुन् : अध्यक्ष श्रेष्ठ
काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले अहिलेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराबाट न्याय पाउने सम्भावना नरहेकाले आन्दोलनमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश जबरा बिचौलियाका नाइके भएको आरोप लगाए । ‘न्यायपालिकाको धरोहर उच्च राख्नका लागि आन्दोलन जारी छ उहाँको इजलासबाट न्याय पाउन सक्दैनौँ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने,‘ प्रधानन्यायाधीश जबरा बिचौलियाका नाइके हुन्, […]
सपथग्रहण समारोहमा प्रधानन्यायाधीश जबरा अनुपस्थित्
काठमाडौं, २२ असोज । नवनियुक्त मन्त्रीहरुको सपथग्रहण समारोहमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा अनुपस्थित् भएका छन् । अहिले राष्ट्रपति कार्यालय शितलनिवासमा जारी सपथग्रहण समारोहमा प्रधानन्यायाधीश जबरा गएका छैनन् । मन्त्रिमण्डलमा भागबण्डा खोजेको भन्ने समाचार आएकै बेला जबराको जेठान गजेन्द्र हमाललाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्योग, वाणिज्य तथा आर्पूितमन्त्री बनाएका हुन् । हमाल कांग्रेसका पूराना नेता हुन् । […]
कसरी सुनुवाइबाट अलग हुने निर्णयमा पुगे प्रधानन्यायाधीश जबरा ?
पटकपटक बृहत इजलासको अडान नछाडेका प्रधानन्यायाधीश जबरा अन्ततः एक्लै पर्ने महशुस गरेपछि सुनुवाइबाट अलग हुने निर्णय गरेर निकास दिएको देखिन्छ ।